Shina 1/4 Fiarovana ara-pahasalamana azo atsimbina azo ampiasaina amin'ny famokarana sy orinasa | Zhonghe
1/4 Aforeto ny fiarovana ny fahadiovana azo esorina
Vokatra fanadiovana sy fahadiovana Ny efitrano fidianao sy ny fahadiovanao amin'ny ankapobeny dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahafaham-pon'ny mpiasa, ny vahiny ary ny mpanofa trano. Ny lamba famaohana taratasy fampiasa amin'ny ankapobeny, taratasy fidiovana, fonon-tavy fidiovana sy vokatra momba ny fahadiovana amin'ny tanana sy vatana dia manampy amin'ny fisorohana ny fihanaky ny mikraoba sy miaro amin'ny fahalotoan'ny hazo fijaliana. Fiarovana sy fiarovana manokana Ny fampitomboana ny vokatra dia tsy tokony hidika ho fahafoizan-tena. Miorina amin'ny zavatra antsointsika hoe "injenieran'ny centric-n'olombelona," ny fonon-tànantsika, ny solomaso fiarovana ary ny akanjo fiarovan-tena dia natao hitazomana ny fampandehanan-dresakao hilamina sy hilamina ny vahoaka.
1/4 (Quarter) Aforeto ny fonosana fonosana fonosana fidiovana
Anaran'ny vokatra 1/4 Fiarovana amin'ny fidiovana ara-pahasalamana azo sarahana fonosana fonosana lamba fidiovana
ara-nofo Pulp namboarina
Aforeto 1/4 aforitra
Fonosana 200sheet / boaty, boaty 25
Loko Fotsy na volontany
Boaty anatiny habe 26 * 205 * 32mm
Tranga ivelany 41 * 27 * 36.5cm
Atsofohy any ambanin'ilay trano fidiovana izy ireo aorian'ny fampiasana vita avy amin'ny taratasy 100% Virgin Pulp ho fanariana sy fanadiovana mora foana.
Ny fonon'ny seza fidiovana dia mety tsara amin'ny Saron-seza fivoahana 1/4 mivalona dispenser.
Saron-tseza fidiovana dia misy takelaka 200 isaky ny fonosana, hiantohana fa tsy tokony hofenoina lalandava ny dispenser.
Mitazona ny fahadiovana araka izay azo atao ho an'ny vahiny.
Tsy mila esorina ao anaty boaty ireo fonony, esory fotsiny ireo tsipika misy teboka ary apetraho ao anaty fonony fonosana ilay boaty.
Takelaka: 425 * 360mm
Teo aloha: Roll Base taratasy taratasy rakotra seza fidiovana
Manaraka: Vidiny ambany ho an'ny China Disposable Portable Hygienic Travel / Sap / Salon Waterproof Paper Toilet Seza Cover
Saron-seza fivoahana 1/4 mivalona
Fampiasana ara-pahasalamana 1/4 aforeto fonony fonony Wc
1/4 aforeto fanadiovana taratasy fidiovana taratasy fidiovana, 125pc ...
1/4 Aforeto ny fonosana fonosana lamba famaohana taratasy